Navoaka ny fonja ilay vazimba Goatemalteka mpanora-gazety voampanga ho manao fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Manampy isa ireo mpanora-gazety sy mpikatroka enjehina ao amin'ny firenena i Francisco Lucas
Voadika ny 14 Janoary 2020 15:59 GMT
Namotsotra an'i Francisco Lucas Pedro izay notazonina hatramin'ny 21 desambra 2019 lasa teo ny Efi-pitsarana Risika Lehibe efitra ‘B’. Saripikan'i Nanci Sinto. Nahazoana alalana.
Efi-pitsarana iray ao Guatemala City no namotsotra ilay tompotany mpanora-gazety sady mpikatroka Francisco Lucas Pedro tamin'ny 3 Janoary lasa teo rehefa nohazonina 13 andro hatramin'ny nisamborana azy tao amin'ny departemantan'i Huehuetenango ao avaratra atsinanana. Araka ny polisy, voampanga ho nanao fampihorohoroana sy nanao fanahy iniana nandoro izy, saingy nilaza ireo vondrona mpandala ny zon'olombelona fa tsy ara-dalàna ny nisamborana azy.
Tamin'ny taona 2012, nisy efi-pitsarana misahana ny ady heloka bevava iray namoaka didy fampisamborana an'i Lucas izay nifototra tamin'ny fitarainana nataon'ny Ecoener Hidralia Energía izay tohanan'ny Banky Mondialy. Io no orinasa espaniola ao ambadiky ny Hidro Santa Cruz, ilay orinasa nitady ny hanangana ilay tohodrano mampiady hevitra ao amin'ny reniranon'i Q'am B'alam, izay heverina ho toerana masina ho an'ny vahoaka Q'anjob'al.
Mpandray anjara mavitrika i Lucas tamin'ny hetsika sivika ho fanoherana ny tohodrano, izay najanon'ny orinasa mpanorina taorian'ny valo taona nisian'ny fihetsiketsehana, ady eny amin'ny fitsarana ary ny tsindry iraisampirenena. Nilaozan'ny Ecoener Hidralia Energía i Goatemalà tamin'ny taona 2016.
Nitarika fanentanana hamoahana an'i Lucas ny Prensa Comunitaria, niaraka tamin'ilay Mayana mpikatroka nahazo ny Loka Nobel Rigoberta Menchu, ny biraon'ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona ao Goatemalà (OACNUDH Guatemala), ary ny Birao misahana ny Zon'Olombelona ao Goatemalà.
Rehefa noafahana i Lucas, dia niteny tamin'ny mpanangom-baovao fa nihatra tamin'ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina ny nisamborana azy.
Androany, 3 Janoary, nanapa-kevitra tamin'ny raharaha momba ahy ny mpitsara fa tsy ampy ny porofo [hamelezana ahy], saingy tiako ihany koa ho fantatry ny vahoaka fa niantraika tamin'ny fiainako iny, niantraika tamiko ara-batana izany noho ny fampijaliana nahatra ary tiako atao mazava tsara ihany koa, tiako izao tontolo izao hahita fa tsimanantsiny aho.
Nilaza ny polisy fa nampangaina i Lucas ho “naneritery, nandrahona, nandoro, hetsika manohitra ny filaminan'ny vahoaka, fampihorohoroana, fakana an-keriny, fihazonana tsy ara-dalàna, ary fanafihana natao tamin'ny mpitandro ny filaminan'ny asam-panjakana.”Nolazaina fa nofoanana tamin'ny taona 2016 noho ny antony izay tsy hitan'ny Global Voices ny hanamarinana azy ireo vesatra niampangana azy ireo.
Raha atotaly, mpiaro ny tany miisa 21 no nampangaina tamin'ny raharaha Hidro Santa Cruz. Nomelohina higadra 33 taona am-ponja noho ny fikasana hamono olona ny roa amin'ireo olona ireo, Saúl Méndez sy Rogelio Velásquez, tamin'ny taona 2014. Navotsotra ireo olona ireo tamin'ny taona 2016 rehefa nandresy tamin'ny fampakarana ny raharaha. Tamin'ity raharaha ity, nanoratra ireo mpitsara tao amin'ny fampakarana ny raharaha fa “tsy ho afaka hamela fotsiny izahay, na hanohana famotorana tsy miraharaha loatra, tsy mahomby ary tsy misy vokany, ilay mifototra amin'ny porofo tsy mitombina… Tsy nety nahazo karazana porofo entina ilazana ho nanao ilay fihetsika hamelezana ny voampanga [mpampanoa lalàna],” araka ny songadin-dahatsoratra notaterin'ny Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI Guatemala).
Fantatra kokoa amin'ny anarana Mayana, Palas Luin, mpikambana ao amin'ny hetsika politika vazimba Winaq, i Lucas, izay manampahaizana manokana amin'ny fitantanana kaonty ary miasa ho an'ny sehatra ao an-toerana Prensa Comunitaria. Tamin'ny fotoana nisamborana, teo am-panaovana ny tatitra fitsarana ireo mpiasan'ny Hidro Santa Cruz miisa roa izay ampangaina ho namono mpikambana ao amin'ny fokonolona tao an-toerana izy sy nandratra olona roa hafa tamin'ny taona 2012, araka ny Prensa Comunitaria.
Goatemalteka mpiaro ny zon'olombelona miatrika fandrahonana ara-pitsarana
Mihevitra i Michel Forst, iraka manokan'ny Firenena Mikambana misahana ny toe-draharahan'ny mpiaro ny zon'olombelona, fa iray amin'ireo lasibatra amin'ireo andian-draharaham-pitsarana mihatra amin'ny mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ity firenena Amerikana Afovoany ity i Lucas.
Mpitarika ao amin'ny fiarovana zon'olombelona miisa 106, indrindra indrindra fa ireo avy amin'ny vahoaka vazimba, no nohazonina tsy ara-drariny tanelanelan'ny taona 2017 sy 2019, araka ny tatitry ny OACNUDH sy ny Ôfisy Goatemalteka misahana ny Zon'Olombelona. Araka ireo andry roa ireo ihany, “apetraka ho jiolahy” ny lasibatra, izay midika fa “ampiasaina tsy araka ny tokony ho izy (hamelezana azy ireo) ny lalàna ady heloka bevava”, araka izay voamarika tao amin'ny tatitra navoakan-dry zareo tamin'ny Desambra 2019.
Araka ny Global Witness, “Goatemalà no firenena ahafatesan'ny mpiaro tany be indrindra araka ny isan'ny mponina amin'ny fisian'ny famonoana olona miisa 16 voamarina ny fisiany” tamin'ny taona 2018, hita tao amin'ny tatitra navoakan'ny France24. Nahitana fisondrotana haingana amin'ny fanafihana ireo mpiaro tany ihany koa i Goatemalà tamin'io taona io.
Nanamarika ihany koa ny OACNUDH sy ny Ofisy misahana ny Zon'Olombelona tao amin'ny tatitra fa “manana fiantraikany ratsy amin'ny ambaratonga samihafa ny fanafihana hamelezana ny mpiaro (ny tany), na eo amin'ny tsirairay, eo amin'ny tontolon'ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina (indrindra fa eo amin'ny vahoaka indizeny), ka vokatr'izany dia miteraka fahanginana sy tsy fahafaha-mihetsika eo amin'ny asan-dry zareo.”
Misara-kevitra ny fiarahamonina Goatemalteka amin'ny raharaha tahaka itony. Raha nisioka amin'ny fanohanany an'i Lucas ny OACNUDH, dia namaly amin'ny fisalasalàny amin'ny maha-tsy manantsiny azy ny olona.
Ohatra, samy nanana ny famaliany ny mpisera Twitter Hugo Castañeda sy Luisa Ferreiro, fa “azo atao ny heloka rehetra rehefa miantso ny tenanao ho mpiaro ny tany ianao…” sy hoe “mahagaga ny fanohanany ireo mpiady anaty akata, maharikoriko.”
Ny hafa kosa maneho ny fanohanany an'i Lucas amin'ny fampiasana farangonteny “#ChicoLibre”. Victorino Tejaxún, ohatra, nisioka fa tsy ara-drariny ny hametahana an'Atoa Lucas ho jiolahy.
El malicioso uso del derecho penal para criminalizado a defensores de derechos humanos queda evidenciado nuevamente.#ChicoLibre https://t.co/afvp3GRX8T
Francisco Lucas Libre! Miharihary indray ny fampiasana amin-tsaindratsy ny lalàna ady heloka bevava amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona. #ChicoLibre
Maneho ny fanohanany ihany koa i Sara Curruchich, mpihira vazimba Kaqchikel.
🔊 Sumo mi voz para denunciar la criminalización de Francisco Lucas, defensor del Pueblo Maya Q'anjob'al. Se suma a la larga lista de personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Guatemala. ¡ Lxs defensorxs no son criminales ! #ChicoLibre pic.twitter.com/jatsSB86kc
Ataoko ho fanampiny ny feoko hiampangana ny fanaovana an'i Francisco Lucas, mpiaro ny vahoaka Mayana Q'anjob'al, ho jiolahy. Nanampy isa ny lisitra lavaben'ny mpiaro ny zon'olombelona napetaka ho jiolahy ao Goatemalà izy. #ChicoLibre
Ho an'i Nansi Rodriguez, mpandray anjara iray mitatitra momba an'i Goatemalà ho an'ny taratasim-baovao mivoaka isa-kerinandro Central American News, nandravarava ny fisamborana. Isa-kerinandro, matoky ny Prensa Comunitaria –izay mamariparitra ny tenany ho manao “fanoratan-gazetim-piarahamonina, feminista ary mizakatena” – ho loharanom-baovao manandanja sy tsy azo soloina izy.
“mahavaky fo satria Prensa Comunitaria no loharanom-baovao voalohany manolotra torohay amin'ny lohahevitra ara-tontolo iainana sy ireo fanafihana manjo ny pueblos izay tsy misy amin'ireo tranonkalam-baovao lehibe mba miresaka,” hoy Rtoa Rodriguez tamin'ny Global Voices. “Manolotra fanantenana ho an'ny olona mba hahara-baovao ny Prensa Comunitaria ary mahatonga ireo fokonolona voahilika anjorombala hanana feo.”
Tsy nitatitra ny fisamborana ny Prensa Libre, iray amin'ireo gazety be mpamaky indrindra ao Goatemalà.
Naotin'ny tonia: Melissa Vida, izay mpanoratra ity tantara ity, no tonian'ny taratasim-baovao mivoaka isa-kerinandro Central American News.